MARTI-QAADKII CEEBTA (Qeybta-1aad) – Voice of Somalis In Exile
Wuxuu ku hambaaraarugay taleefoonkiisii gacanta oo dhacaya, inta qaarkiisa kore kor u hilmiyey, indhaha marmartay ayuu si hal-haleel leh gacantiisa midig u hoos haabiyey, barkintii uu ku jiifay oo uu iminka ka toosay.
Teleefoonku weli waa dhacayaa, laakiin weli ma anuu helin, mar dambe ayuu ogaaday in anuu barkinta ku hoos jirin, balse uu dhulka ka dhawaaqayo, inta qaarkiisii hore laadlaadshay ayuu ka soo haabtay dhulka, dhagta ku qabo-da uu is lahaanatleefonkii dhawaaqii wuu joojiyey, wuxuu isku dayey in uu ogaado cida soo wacday, tabaduu is lahaana, dabkii waa ka dhamaadayba waana is damiyey.
Ayar buu isaga laabtay hurdadii uu ka kala gooyey taleefonka baas, inta go’ii isku sii daday ayuu dhinaca bidix u seexday, balse hurdo waa ka soo dhici weysay, markuu cabaar gal-gashay ayuu laabta iska yiri: Bal isakaba toos!!
Wuxuu ka soo holladay sariirtii, taleefonkii mobileka ahaana horey ayuu u soo qaaday, qol kale oo dhalinyaro deggan tahay ayuu hor istaagay, meel illinka geeskiisa ah oo miis yari yaalana wuxuu ka qaatay dab-buuxiyihii (Charger-kii) taleefonka oo mahala ay wadaagaan isaga iyo dhowr kale, godkii danabka (BRESSKII) ayuuna geliyey, ka dibna wuxuu u aaday in uu isa soo dhaqdhaqo, cadaydo quraacdo IWM.
Teleefonkii oo show markuu dabka qatayba is iskiis ah isku shiday ayaa misna soo dhacay, markaan kama foga mana hurdee, waa ku booday.
Haloow iyo yaa waaye ayuuna is daba dhigay, cod buuxa oo guuxu ku badan yahay, ayaa loogu jawaabay: “ War kaagaan yari, ma iminkaad bilowday in aad taleefonada nagu dhageysato?” intuu isku naxay, codkana gartay ayuu yiri: “ Mayee guddoomiye, waan hurdayoo, waa digii ogaa xalayto goortii dambe oon shirkii ka baxnay, anigana gaadiid xumo badan aya I heshay oo waa tii baabuurtuba iga buuxsameene, intaa markuu marinayo, ayaa loogu jawaabay: “ Markaa ilaa xilligan duhurka ah ayaad jiiftay, aniguna waa daalay sidaan kolba u dheehanayey meeshii, waxba kuma jiraan, waxbana kuma aadan qorin” intuu soo booday ayuu isku difaacay: “ Hadde waa aniga kuu sheegay, oo xilli dambe oo waagiiba baryey ayaan seexdaye, markaan xaafadda imidna dabku waa ka maqnaa, iminkadaas ayaanse gelinayaa” codkii buuxay ee dhanka kale ka hadlayey ood iminka moodo in la yara dabciyey ayaa yiri: “ waxaanu heysanaa waqti yar, fadlan ku dhaqso, ka dibana iigu imoow maqaayaddii CINDI, si aan kuu maamulo, intaas ka dibna qofkii dhanka kale ka hadlayey waaba dhigay taleefonkii.
Farax yare, oof baa ku taagan, in kastoo qofkii soo wacay uu iminka dhigay taleefonkii laakiin howsha sugeysa ayuu ogyahay, inta quraacdiiba iska daayey ayuu dul fariistay computer u yaalay qolka, wuu shiday, wuxuuna galay website-kiisii uu wax ku qorayey, markuu bogii la soo kala baxayna, wuxuu ku bilaabay in uu qoro kolba wixii ey la ahayd in uu qoro.
Qoryey wixii uu worayey, inta neef weyn iska soo gooyey, ayuu dib u fariistay, wuxuu xogaa ka yara fekeray, in uu dib u aqriyo wuxuu qoray iyo in uu badhanka u taabto oo hawada ku daro, waqti yarada heysata darteed iyo karkabada dhinaca kale lagaga hayo sababteed ayuu go’aansaday in uu hawada ku daro oo waxba aanuu la sii raagin, sidii buuna yeelay.
Intuu weli dul fadhiyey combuterkii oo uu egayey sidii in uu isaga qudhiisu qof yahay ayaa misna taleefonkii oo weli daradda yaala sidiina dabkii ugu jira, mar kale soo dhacay:
Wuu ku cararay, markaan intii hore waa ka rajo badan yahaye, wuxuu filayaa in lagu bogaadiyo shaqada uu durba kala tuuray, mise waa isla codkii: “ Waryaahe kaagan yari, ma waxaad naga dooneynaa, in aanu wax aan inaga suurtagelin cadiyan iminka innaga suurtagalaan? War waa maxay waxa aad qortay? ujeedkiiba waa marin habaabisay? Intaa markuu dhageystay ayuu kari waayey in uu sii dhageysto, intuu isagoo firka naxsan candhuufta dib u liqay ayuu yiri: “ Guddoomiye iminkadaan ayaa saxayaa ee iga war dhowr” wuuna ku dhigay taleefoonkii.